Wararka Maanta: Axad, Sept 9 , 2012-Ciidammada dowladda iyo kooxo hubeysan oo xalay ku dagaalamay xaafadda Xamar-jadiid ee Degmada Wardhiigley
Iskahorimaadkan oo dhacay saqdii dhexe ee xalay ayaa wuxuu billowday kaddib markii dableyda hubeysani ay weerar ku qaadeen guri ay degmadaas ka deggenaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya.
"Dagaalku wuxuu ahaa mid la isku adeegsaday hub kala duwan, wuxuuna si toos ah u socday nuso saace, laba qof ayaana ku dhimatay," ayuu yiri goobjooge ku sugan degmadaas oo sheegay inay saakay arkeen maydadka laba qof oo kala ahaa qof shacab ah iyo mid ka mid dhinacyadii dagaalamay.
Ciidammo ka tirsan kuwa nabadsugidda dowladda Soomaaliya ayaa saakay baaris ku wada xaafadda Xamarjadiid iyadoo weerarkaas lagu eedeeyeen kooxo taageersan Xarakada Al-shabaab.
Dadweynaha ku nool xaafadda uu xalay dagaalka ka dhacay ayaa sheegay inay ka qabaan cabsi weyn inay dagaalladu soo noqnoqdaan, waxaana dagaalkan uu kusoo beegmayaa iyadoo baaritaanno lagu sugayo ammaanka ay ka socdaan qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho.
Habeennadii ugu dambeeyay ayaa waxaa Muqdisho ka dhacayay iskahorimadyo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxo hubeysan oo gacansaar la leh Al-shabaab, waxaana dagaalladan ay kusoo beegmayaa iyadoo Muqdisho uu ka socdo diyaar-garowga doorashada madaxnimo ee dalka.